Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေမျှရအောင် - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေမျှရအောင်
ပြန်စာ - Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယော&a
Originally Posted by waihtutpai
Cisco packet tracer software ဒေါင်းလို့ မရလို့ ပါခင်ဗျာ
လင့် ပြန်တင်ပေးပါလို့ တောင်း ဆိုပါရ စေ အကိုတို့ ခင်ဗျား
မျိုးဟန်ထက်, ရဲထွတ်, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, minthike
30-04-2012, 07:40 PM
ပို့စ်9ခုအတွက် 18 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Cisco အကြောင်းလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယော&#
Cisco အကြောင်းကို သေချာ ဘာလို့မေ၇းပေးကြတာလဲ ။ မသိဘူး နော် ။ သိသူများကူညီစေချင်ပါတယ်။ packet tracer 5.3.3 လဲထွက်နေပါပြီး။
Find More Posts by သတိုးမောင်
30-07-2012, 01:10 PM
ပို့စ်9ခုအတွက် 35 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်က CCNA သင်တန်းတက်ပြီးသွားပါပြီ။စာမေးပွဲတော့ မဖြေရသေးဘူး....စာမရသေးလို့ :P .CCNA နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်သိသလောက် ဝင်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဒီ forum မှာ ကျွန်တော့်ထက်သိတဲ့ တက်တဲ့ အစ်ကိုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သိပြီးသား နားလည်ပြီးသား အစ်ကိုတွေ အနေနဲ့လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ အမှားတွေ ပါရင် ထောက်ပြ ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ configuration ပိုင်းတွေကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။အစကနေ စဆွေးနွေးချင်ပေမဲ့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မအားတာကြောင့် အလယ်ပိုင်းလောက်ကပဲ ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ခု ကျွန်တော်ပြထားတာကတော့ switching ပိုင်းအစက switch တွေကို vlan ခွဲထားတာပါ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း switch တစ်ခုထဲမှာ vlan2ခု ခွဲထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ fa 0/1, fa 0/2 , fa 0/3 port တွေနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို vlan2မှာ ထားပြီး fa 0/4 , fa 0/5 , fa 0/6 port တွေကိုတော့ vlan3ထားထားတဲ့အတွက် အဲဒီ ပေါ့ တွေမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေကတော့ vlan3ထဲဝင်သွားမှာပါ။
Switch(config)#int ran fa 0/1 - 3
Switch(config-if-range)#sw acc vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
Switch(config)#int ran fa 0/4 - 6
Switch(config-if-range)#sw acc vlan 3
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
Switch#copy run sta
2 VLAN0002 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
3 VLAN0003 active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
command တွေကို အတိုကောက်ပဲ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ စာမေးပွဲမှာတော့ အဲဒီလို အတိုကောက် သုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ အတိုကောက်တွေသုံးတက်ရင်တော့ configuration လုပ်ရာမှာ မြန်တာပေါ့ခင်ဗျာ...:P
ခုမှစလေ့လာမယ့်သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ ကွန်မန်း အတိုင်း လက်တွေ့ configuration လုပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် packet tracer 5.3.2 ကို သုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးချက်မှာ အမှားပါရင် ထောက်ပြပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ။
Last edited by mr.smith; 30-07-2012 at 03:33 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ mr.smith အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကော်ဖီ, azp09, kokhing, Lwin Thu, minthike, tu tu
အပေါ်က ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ထဲက command လေးတွေကို တစ်ခုချင်းပြန်ရှင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရင်ဆုံး cisco switch တွေမှာအကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် user mode ( console mode ) ,enable mode ( privileged mode ) , global configuration mode , interface configuration mode ဆိုပြီး mode ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
mode ၄ ခုဟာ အခုလိုမျိုး အစဉ်လိုက်အတိုင်း သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1.user mode ( switch ထဲ ပထမဆုံး စဝင်တဲ့ mode ပါ။)
2.enable mode ( user mode ပြီးတော့ တွေ့ရမယ့် mode ပါ။)
3.configuration mode ( configuration setting တွေကို ဒီ mode မှာလုပ်ပါတယ်။)
4.interface mode ( interface တွေထဲဝင်တဲ့ mode ပါ။ ဥပမာ fa 0/1 , se 1/0,..... စသည်ဖြင့်)
en ( enable ) ဆိုတာက enable ကွန်မန်းပါ။terminal ကနေ enable mode ထဲဝင်တဲ့ ကွန်မန်းပါခင်ဗျာ။
conf t ( configuration terminal ) ဆိုတာက configuration mode ထဲဝင်တဲ့ ကွန်မန်းပါခင်ဗျာ။configuration mode ထဲရောက်မှ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ configuration setting တွေချလို့ရမှာပါ။
int ran fa 0/1 -3( interface range fastethernet 0/1 -3) ဆိုတာမှာ အရင်ဆုံး ရှေ့ဆုံးက int ( interface ) ကွန်မန်းက interface mode ထဲဝင်တဲ့ ကွန်မန်းပါ။ interface mode ဆိုတာ အလွယ်ပြောရရင် switch ရဲ့ port တွေ ဥပမာ fa 0/1 , fa 0/2 ,... စသည်ဖြင့် port တွေထဲဝင်တာပါ။ ran fa 0/1 -3( interface range fastethernet 0/1 -3)ဆိုတာကတော့ fa 0/1 ကနေ fa 0/3 ထိ လို့ပြောတာပါ။ ကွန်မန်းတစ်ခုလုံးကို ပြန်ရှင်းရရင် switch port fa 0/1 ကနေ fa 0/3 အထိ ကို configuration လုပ်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
sw acc vlan2( switchport access vlan2)ဆိုတာကတော့ အစောတုန်းက switch port fa 0/1 ကနေ fa 0/3 အထိကို vlan2ထဲထည့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် ဒီport တွေနဲ့ ချိတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ အကုန်လုံးဟာ vlan2ထဲဝင်သွားမှာပါ။ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ဘာလို့ vlan 1 ထဲမထည့်တာလည်းလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ vlan 1 ဟာ cisco switch တွေမှာ default vlan ဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှ configuration မလုပ်ထားရင် switch ရဲ့ port တွေ အကုန်လုံးဟာ vlan 1 ထဲမှာ ထားထားပြီးသားပါ။
no shut ( no shutdown ) ဆိုတာကတော့ အဲဒီ vlan တွေကို ပိတ်မထားဖို့ပြောတာပါ။ cisco switch တွေဟာ default အားဖြင့် vlan တွေကို ပိတ်ထားတက်ပါတယ်။
exit ကွန်မန်းကတော့ interface mode ကနေ ပြန်ထွက်မယ်လို့ဆိုတာပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ configuration mode ထဲ ပြန်ရောက်သွားပါပြီ။
ပြီးရင် vlan3ကိုလည်း အပေါ်က အဆင့်တွေအတိုင်း ပြန်ပြီး configuration လုပ်ပါမယ်။
vlan3ကို configuration လုပ်ပြီးသွားရင် အပေါ်ကအတိုင်း exit ကွန်မန်းနဲ့ ပြန်ထွက်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ configuration mode ထဲပြန်ရောက်သွားပါပြီ။
နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ exit ဆိုပြီး ထပ်ရိုက်ပါမယ်။
အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ enable mode ထဲပြန်ရောက်သွားပါမယ်။
enable mode ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ copy run sta (copy running-config startup-config ) ဆိုတဲ့ ကွန်မန်းကို ရိုက်ပါမယ်။ ဒီကွန်မန်းကို ရိုက်ရတာက ကျွန်တော်တို့တွေ အပေါ်ကလုပ်ခဲ့ သမျှကို save လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီကွန်မန်းမရိုက်မိဘဲ switch ကို ပိတ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ထားသမျှ ပျက်သွားမှာပါ။
show vlan brief ( show vlan brief ) ကတော့ ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ထားခဲ့တဲ့ vlan တွေကို ပြန်ကြည့်တာပါ။အဲဒီမှာ.....
2 VLAN0002 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 ဆိုတာက fa 0/1 ,fa 0/2 , fa 0/3 ဟာ vlan2ထဲမှာ ရောက်သွားပြီဆိုတာကို ပြထားတာပါ။
3 VLAN0003 active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 ဆိုတာက fa 0/4,fa 0/5, fa0/6 ဟာ vlan3ထဲမှာ ရောက်သွားပြီဆိုတာကို ပြထားတာပါ။
ခုကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေက command တစ်ခုချင်းဆီကို အကြမ်းဖျဉ်း ပြောထားတာပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် ဆွေးနွေးထားတာကို သိတဲ့ နားလည်တဲ့ အစ်ကို များလည်း ဝင်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ mr.smith အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကော်ဖီ, မောင်ငယ်လေး၁၃, azp09, kokhing, Lwin Thu, minthike, tu tu
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် switch ကို enable password ဘယ်လိုပေးသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Cisco switch တွေမှာ mode လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်အရင်ပို့စ်တွေမှာ ပြောခဲ့ ပြီးပါပြီ။
အဲဒီထဲမှာ enable mode ဆိုတာကတော့
ကွန်ပျုတာကနေ switch ထဲကို console ကနေဝင်ရင် user mode ပြီးနောက် ဒုတိယ mode ဖြစ်ပါတယ်။
enable mode ပြီးရင် global configuration mode ရှိပါတယ်။
enable mode ကို password ပေးထားခြင်းအားဖြင့် မသမာသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ switch ထဲကို အလွယ်တကူ ဝင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
အောက်မှာ ကွန်မန်းတွေ ရေးပြထားပါတယ်။( ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်မန်းတွေကို အပြည့်အစုံ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ)
Switch(config)#enable password 12345
အပေါ်က ကွန်မန်းတွေ ရိုက်ပြီးသွားရင် show running-config လို့ ရိုက်ကြည့်ပါ။show running-config ရိုက်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပေးထားခဲ့တဲ့ enable password ကို မြင်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ 12345 လို့ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့် switch ထဲ hacker တွေ ခိုးဝင်ရင် လွယ်အောင်လို့... :P ။
ကျွန်တော်တို့ switch ကို exit တွေနဲ့ ပြန်ထွက်သွားပါ့မယ်။ ပြီးတော့ switch ကို အစကနေ ပြန်ဝင်ကြည့်ရင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
enable password တောင်းနေပါပြီ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က enable password မပေးနိုင်ရင် enable mode ထဲမဝင်နိုင်တော့ပါဘူး။ enable mode ထဲ မဝင်နိုင်ရင် switch တစ်ခုလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ configuration တွေလုပ်ရမယ့် global configuration mode ထဲလည်းမဝင်နိုင်တော့ ပါဘူးခင်ဗျာ။
global configuration mode ကိုလည်း password ပေးလို့ ရပါသေးတယ် ။ အဲဒါကိုတော့ နောက်ရက်တွေမှပဲ ကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ကွန်မန်းတွေက နည်းလည်းနည်း၊လွယ်လည်းလွယ်တဲ့ အတွက် ကွန်မန်းတစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်မရှင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် ဆွေးနွေးထားတဲ့ ပို့စ်မှာ အမှားပါရင် သိတဲ့အစ်ကိုများ ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
မောင်ငယ်လေး၁၃, azp09, Lwin Thu, minthike, PyaitSone, tu tu
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် Cisco နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Cisco ရဲ့ Certifications ( အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ) အကြောင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Cisco ရဲ့ Certifications တွေအကြောင်းမပြောခင် Cisco ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု Level တွေကို အရင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Cisco Level တွေကတော့..
Entry Level ကတော့ အနိမ့်ဆုံး Level ဖြစ်ပြီး Architect Level ကတော့ အမြင့်ဆုံး Level ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါ Level တွေအလိုက် Certifications တွေကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Expert Level = CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)
Professional Level = CCNP (Cisco Certified Network Professional )
Associate Level = CCNA (Cisco Certified Network Associate )
Entry Level = CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician )
ကျွန်တော်တို့ ပြောပြောနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသားကြီး CCNA ကတော့ ဒုတိယ Level ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တစ်ခု ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဟာ
CCNA လက်မှတ်ရပြီးရင်တောင် Associate Level Network Technician/Engineer ပဲဖြစ်အုံးမှာပါ။ တစ်ကယ် Professional အဆင့်ကို ရောက်ချင်ရင် CCNP စာမေးပွဲကို ထပ်ဖြေရအုံးမှာပါ။ CCNP စာမေးပွဲအောင်ပြီးလို့ CCNP လက်မှတ်ရခဲ့ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Professional Level Network Technician/Engineer ဖြစ်သွားပါပြီ။
အရင်ဆုံး CCNA စာမေးပွဲအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။CCNA စာမေးပွဲကို ဖြေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ Cisco ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်(၂) အုပ်ကို ဖတ်ရပါမယ်။စာအုပ်တွေကတော့
CCENT/CCNA ICND 1 နဲ့
CCNA ICND 2
ကျွန်တော်တို့ဟာ CCNA စာမေးပွဲဖြေမယ်ဆိုရင် နည်းလမ်း(၂) လမ်းရှိပါတယ်။
ပထမနည်းလမ်းကတော့ ပထမစာအုပ် CCENT/CCNA ICND 1 စာအုပ်ကိုဖတ်၊ lab လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ် ၊ ပြီးရင် မေးခွန်းဟောင်းတွေ လေ့လာ၊ စာရရင် CCENT စာမေးပွဲကိုဖြေပါမယ်။ အောင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ CCENT Certificate လက်မှတ်ရ Entry Level Network Technician/Engineer ဖြစ်သွားမှာပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒုတိယစာအုပ် CCNA ICND2စာအုပ်ကိုဖတ် ၊ ပြီးရင် ထုံးစံအတိုင်း သူ့ထဲကပါတဲ့ lab တွေကို လေ့ကျင့် ၊ မေးခွန်းဟောင်းတွေ လေ့လာ၊ ပြီးရင် စာမေးပွဲဖြေ။ အောင်ခဲ့ရင်တော့ ရှေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ရခဲ့တဲ့ CCENT လက်မှတ်ရယ်၊ အခု ICND2လက်မှတ်ရယ် နှစ်ခုပေါင်းပြီး CCNA လက်မှတ်အဖြစ် ထုတ်ပေးမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ CCNA လက်မှတ်ရ Associate Level Network Technician/Engineer အဖြစ် ပြည်တွင်းမှာရော ၊ ပြည်ပမှာပါ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ စာအုပ်နှစ်အုပ်စလုံး CCENT/CCAN ICND 1 ရော၊ CCNA ICND2ရော နှစ်အုပ်လုံးကို ဖတ်၊ လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးရင် CCNA စာမေးပွဲကို တိုက်ရိုက်ဖြေတဲ့နည်းပါ။ ဒါကတော့ စာမေးပွဲ တစ်ခုပဲ ဖြေရမှာ ဖြစ်ပြီး CCNA လက်မှတ်ကို တမ်း ရမှာပါ။(စာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးကို ပိုင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ခင်ဗျာ...... :P )
ဒီနေရာမှာ ဘယ်နည်းလမ်းက ကောင်းသလဲမေးရင်တော့ မိမိအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်က စာရတယ် ပိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒုတိယ နည်းလမ်းကို ရွေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ CCNA လက်မှတ်ရပြီဆိုပါတော့။ CCNA လက်မှတ်ရဲ့ အထက်မှာ CCNP နဲ့ CCIE တို့ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း မိမိရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေကတော့ CCNA လက်မှတ်နဲ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုနည်းတွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ပြောသွားတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော့်ပို့စ်ထဲမှာ အမှားများပါခဲ့ရင် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
ဒီပို့စ်လေးနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော် myanmarfamily forum မှာ cisco နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေရယ် ၊ ကဗျာတွေရယ် ကို mr.smith နာမည်နဲ့ နည်းနည်းပါးပါး ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော့်နာမည်က ကျော်စွာလင်းပါ။မန္တလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ကနေ BE( IT ) နဲ့ကျောင်းပြီးထားပြီး လက်ရှိ ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္မဏီမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မန္တလေးမှာ နေပါတယ်။ကျွန်တော် technical post ကိုရေးတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့်ပို့စ်တွေမှာ အမှားပါခဲ့ရင် စာဖတ်သူတွေကို အနှုးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ mr.smith အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, Lwin Thu, tu tu
Ccna ကို ရန်ကုန် မှာ လေ့လာချင်ရင် ဘယ် သင်တန်းက ကောင်းတလဲ၊ဘယ် သင်တန်းမှာ တက်ရင် ကောင်းမလဲ၊ သင်တန်းကျေး က ဘယ်လောက်ရှိပါတလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ အရမ်းသိချင်တယ် သိတဲ့သူ ရှိရင် ပြောပေးကြပါ။
Find More Posts by Khaitha
18-10-2012, 09:58 PM
CCNA တက်တာကလေ NE တက်ထားဖို့လိုလား .. ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီအတိုင်းပဲ CCNA တန်းတက်လို့ရလား
A+ (hardware) တော့တက်ထားပြီပြီဗျ...သူများတွေကပြောနေတယ်.. NE နဲ့ CCNA ကလိုင်းမတူဖူး CISCO ဘက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင် CCNA တန်းတက်လို့ရတယ် .. ပိုက်ဆံနှစ်ခါအကုန်မခံနဲ့ပြောနေလို့ပါ။
24-10-2012, 01:21 AM
တည်နေရာ: ကမ္ဘာ့ အလည်ခေါင်&
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 37 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်းလေ့လာဆဲတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပြီးထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ CCNA တက်ရင် NE ကသိထားသင့်ပါတယ်။ နက်ဝေါ့သမားတစ်ယောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နက်ဝေ့ါချည်းပဲသိလို့မရပါဘူး အခြေခံဖြစ်တဲ့ DNS, DHCP, Firewall (Hardware, Software), Active Directory (AD) စသည်တို့ကို သိထားရပါမယ်။ သိဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Microsoft စာမေးပွဲကိုအရင်ဖြေပါလို့အကြံပေးပါရစေချင်ဗျာ။ နောက်တစ်ခုက နက်ဝေါ့သမားစင်စစ် ဖြစ်လိုရင်တော့ Cisco ဆိုတာချည်းကိုခေါင်းထဲသိပ်မထည့်ပါနဲ့။ ဆိုလိုတာက Network Concept ကိုပဲအာရုံထားပါ။ Cisco, Juniper, Extreme စတာတွေက Vendors တွေဖြစ်ပါတယ် တကယ်တမ်းနက်ဝေါ့အကြောင်းနားလည်ရင် ဘယ်Vendors ကပစ္စည်းကိုဆို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နက်ဝေါ့နောက်ကိုလိုက်ပါ ဗန်ဒါ နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ngaraa အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bagothar85, tu tu
Find More Posts by ngaraa
Originally Posted by khaitha
အကောင်းဆုံးသင်တန်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စာဖတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အကြံပါ။ သင်တန်းတက်ရင် သင်တန်းက သင်သလောက်ပဲရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ စာအုပ်တွေများများဖတ်ပါ ဗီဒီယို ထရိန်နင်တွေများများကြည့်ပါ။ သင်တန်းတွေမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်းမဟုတ်ပါ။
(၀န်ခံချက်။ ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အခုထိ နက်ဝေါ့နဲ့ပက်သတ်တဲ့သင်တန်းမတက်ဖူးသေးပါ။)
30-10-2012, 12:34 PM
cisco အကြောင်းကိုသိပ်မသိပေမဲ့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ယခု cisco သင်တန်းတစ်ခုတက်ရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်
ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများက cisco အကြောင်းကိုလွယ်တယ်လို့ထင်နေကြ
တယ်နော်။ တစ်ကယ့်တစ်ကယ်မှာတော့ cisco ဟာမလွယ်ဘူးဗျ၊ စာမေးပွဲလေးတစ်ခုအောင်ဖို့တော်မှ ကျွန်တော်တို့
အနေနဲ့ Networking, C++, Security+ စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်အဆင့်မဟုတ်တောင်မှ အနဲဆုံးသိထား
မှတ်ထားမှအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကွန်ပျူတာနဲ့ပြီးထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တက်နေတုံးက
OSI ရဲ့7Layer တွေ Hub, Switch, Router, Bridge စတာတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေ Protocol တွေရဲ့အလုပ်လုပ်
ပုံတွေ ကို သေသေချာချာမသိခဲ့ဘူးဗျ။ အခု cisco သင်တန်းတက်မှာသာ Selfstudy , Selflearning တွေလုပ်ပြီး
တော့တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့သိခဲ့ရတာဗျ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ cisco စာမေးပွဲတွေ
သင်တန်းတွေကို သေသေချာချာလေ့လာဖြေဆိုစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေဆုံးမြေဆုံး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ yelinoo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-01-2013, 12:09 PM
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
cisco အကြောင်း ကိုယ့်ဘာသာ အင်တာနက်မသုံးပဲ လေ့လာလို့ရမဲ့ စာအုပ်တွေရှိရင် လိုချင်ပါတယ်..... command တွေရရင် လိုချင်ပါတယ် packet tracer ကျွန်တော့မှာ ရှိပါတယ်..... command မသိလို့ မသုံးတတ်ပါဘူး..... သင်တန်းလည်း မတက် နိုင်လို့ပါ..... အလုပ်က ၀န်ထမ်းမို့ပါ.... ကူညီနိုင်ရင် ကူညီပေးပါနော်...... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.......
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kokhing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kokhing
26-06-2013, 10:33 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Mar 2010
ပို့စ် 525 ခုအတွက် 3,955 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
cisco လိုင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် ဖြေရမယ့်စာမေးပွဲကccnaပါပဲ
ccnaမှာဆို မြန်မာပြည်မှာတော့ routing and switching အဖြေများပါတယ်
အခြားဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ် security .wireless .vioce
ccna ဖြေဖို့ ဆုံဖြတ်ထားဆိုရင်တော့ cisco deviceနဲ့ မစမ်းနိုင်ရင်တောင် simulation softwareတွေ အများကြီးရှိပါတယ်
အကောင်းဆုံးကတော့ GNS3 နဲ့ packet tracerပါဘဲ
Last edited by thureinsoe; 26-06-2013 at 12:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit thureinsoe's homepage!
Find More Posts by thureinsoe
26-06-2013, 12:00 PM
အကို thureinsoe ပြောတာမှန်ပါတယ်။။။
ကျနေ်ာ နည်းနည်းလေး ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ် ဟိ (သိတယ်လို.တော့ မထင်လိုက်နဲ.အုံးနေ်ာ )
Cisco အကြောင်းကို သိတဲ့သူတော့ သိလိမ့်မယ် မသိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။
Cisco ဆိုတာနဲ. computer networking ကိုပြောတာပါလားလို. တခါထဲပြေးတွေးလို.၇ပါတယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ ကွန်ပြူတာတွေတခုနဲ.တခု ဆက်သွယ် သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်နိုင်ဖို. ကြားခံအနေနဲ.သုံးတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ hub , switch , router တွေကို ထုတ်လုပ်ေ၇ာင်းချတဲ့ company ဖြစ်ရုံတင်မကပဲ cisco ရဲ. CEO ပြောနေကျဖြစ်တဲ့ cisco ဟာ hardware(စက်ပစ္စည်း)တွေကို အဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ ကုပ္မဏီမဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီ hub,switch,router တွေအထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ software ဖြစ်တဲ့ IOS (internetwork operating system) ကို အဓိက ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုပ္မဏီဖြစ်ပါတယ်။
hub, switch ,router ဆိုလို. မကြားဘူး၇င် အဆန်းဖြစ်မာစိုးလို. ကျနေ်ာတို.ပြောပြောနေတဲ့ အင်တာနက်ဆိုတာ router တွေ ထောင်သောင်းပေါင်း အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ထားတာကို internet လို.ခေါ်တာပါ။
Cisco ရဲ. certificationများ
Cisco အနေနဲ. certification တွေကို Level အလိုက်ခွဲထားပါတယ်။
1. Entry level (CCENT - cisco certified entry networking technician)
2. Associate level (CCNA - cisco certified network associate)
3. Professional level (CCNP- cisco certified network professional)
4.Expert level (CCIE - cisco certified internetwork expert )
5. Architect level (CCAr - cisco certified architect )
1. Entry level မာတော့ CCT ဆိုပြီးနောက်ထပ်တခုထပ်ခွဲထားပေမယ့် သိပ်ပြီး အပြောမများသလို CCENT ကျတော့လဲ entry(အခြေခံအဆင့်)လို.ပဲ သိထား၇င်လုံလောက်ပါပြီ။
Associate level အကြောင်းမပြောခင် networking အကြောင်းလေး နည်းနည်းလေးပြောပါ၇စေ။ ကျနေ်ာတို. ကွန်ပြူတာတွေကို တခုနဲ.တခု ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လို.၇အောင် ကြားခံအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကို hub ,switch, router တွေလို.ပြောခဲ့သလိုပါပဲ cisco မာ အဓိကလေ့လာရတာကတော့ အဲ့ဒီ switch နဲ. router တွေကို အသုံးပြုနည်းဖြစ်တဲ့ switching and routing ဖြစ်ပါတယ်။
2. Associate Level အောက်မာတော့
@ CCNA လို.ပဲ အတိုတောက်ခေါ်တဲ့ CCNA (switching and routing )
@CCDA (cisco cetified design associate)
@CCNA service provider
@CCNA data center
@CCNA service provider operations - ဆိုပြီး ခွဲထားပေမယ့် အဓိကကတော့ CCNA (switching and routing ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ voice နဲ. security တို.လဲ အသုံးများပါတယ်။
CCENT ကို ဖြေလို.အောင်၇င် CCNA (switching and routing ) ကို အောင်ဖို. စာမေးပွဲတခုကို ထပ်ဖြေပေးတာနဲ. CCNA certifiedဲဖြစ်မာပါ။ CCNA exam ကို လောလောဆယ် ပုံစံ၂မျိုးနဲ. ဖြေဆိုနိုင်ပြီး အောက်တိုဘာကုန်၇င်တော့ ဖြေဆိုနည်း၁မျိုးပဲ ဖြစ်တော့မာပါ။
3. Professional Level - မာတော့ video ကလွဲလို. အပေါ်က associate level က ၈ မျိုးစလုံးပါဝင်ပါတယ်။
4. Expert level - မာတော့ video မပါပြန်ပါဘူး ။ ကျန်တဲ့ ၈မျိုးအပြင် CCIE collaboration နဲ. CCIE storage networking တို.ပါ ထပ်တိုးလာပါတယ်။ CCIE storage networking ကိုတော့ ၂၀၁၃ july အကုန်မာ ဖျက်ပစ်တော့မယ်လို.ပြောပါတယ်။
5. Architect level - မာတော့ CCAr တမျိုးပဲရှိပါတယ်။ Architect level အထိအောင်တဲ့သူတော့ ဘယ်လောက်အ၇ည်အတွက်ရှိမယ်မသိပေမယ့်လို. CCIE ကို အောင်မြင် အောင်လက်မှတ်၇ထားတဲ့သူတော့ လက်ရှိမာ တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ.တောင် ထောင်ဂဏန်းလေးပဲရှိပါတယ်။ CCIE switching and routing စာမေးပွဲတခုကိုပဲဖြေဖို.ကို တနေကုန် ၈ နာ၇ီဖြေ၇တယ်လို.ပြောပါတယ်။လက်တွေ.ဖြေ၇တာဖြစ်ပြီး စာေ၇းဖြေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို တခေါက်ထဲနဲ.အောင်တဲ့သူတော့ တော်တော်ရှားတယ်လို. ပြောကြပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bagothar85, KznT, Lwin Thu, thureinsoe, tu tu
30-06-2013, 06:42 AM
CISCO နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ကျွန်တော့်ကို အသိတစ်ယောက် လာမေးဖူးတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က CISCO မှ မဟုတ်ဘူး ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဘယ်အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းမှ မတက်ဖူးသလို ဘာ Certificate မှလည်း မရခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ အခက်အခဲဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မလေ့လာဖူးတဲ့ CISCO အကြောင်း အင်တာနက်ဆိုင်သွားထိုင်ပြီး နေ့ဝက်လောက် စာဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ အခုရေးတာလည်း ကျွန်တော် ဖတ်ထားတာလေး ပြန်မိတ်ဆက် ပေးချင်ယုံသက်သက်ပါ။
ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ CISCO နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်တန်းတက်ချင်တယ် Certificate တွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး
သူ့သင်တန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာ Certificate တွေ ရှိလဲ၊
ကိုယ်နားလည်ထားတဲ့ Field နဲ့ ကိုယ်တက်ရမယ့် Certification က ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ၊ စာမေးပွဲအတွက် လေ့လာပြင်ဆင်ရမယ့်ကာလ ဘယ်လိုထားရမလဲ၊
Exam တွေကရော ဘယ်နမျိုးရှိသလဲ၊
နောက်လာမယ့် Certificate အတွက် သင်တန်းက ဘာတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ၊
ဒီ Certificate တွေရပြီးရင် ကိုယ့်အနာဂတ်က ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ၊
ဒါတွေကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေကြိုတင်လေ့လာထားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာနိုင်ဖို့က အောက်မှာပေးထားတဲ့ Links တွေကနေ လေ့လာကြည့်ပါ။
CISCO အကြောင်း အခြေခံ
CISCO မှ ရရှိနိုင်သော Certifications များ
Certifications အလိုက် လေ့လာမှုနည်းလမ်းများ
CISCO မှ Certificate ရရှိထားခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
ဒါတွေလေ့လာထားရင် ကိုယ်သင်တန်းတက်တဲ့အခါ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကောင်းကျိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 30-06-2013 at 06:44 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
azp09, bagothar85, Lwin Thu, PyaitSone, thureinsoe, tu tu, zo
30-11-2015, 04:23 PM
ပို့စ် 29 ခုအတွက် 100 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
စင်္ကာပူက ကိုစိုင်းလင်းသူ တို့ကိုဇေယျာဖြိုး တို့ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းဖွင့်ပြီး Cisco နဲ့ ပက်သက်တာတွေ သင်ပေးနေပါပြီ ခင်ဗျာ။
ကိုစိုင်းလင်းသူ က RHC https://www.facebook.com/RhcTechnologies
ကိုဇေယျာဖြိုး + ကိုစိုင်းဥာဏ်လင်းဆွေ + ကိုအောင်နိုင်မိုး တို့ က BIM https://www.facebook.com/bimtrainings/ ပါခင်ဗျာ။
အခုတော့ ရန်ကုန်အိုင်တီလောက က တော်တော်လေးမြိုင်ဆိုင် တိုးတတ်လာပါပြီ။
BIM က ရှေ့ ဒီဇင်ဘာမှာ datacenter အတန်းကို F5 တို့Cisco Nexus switch တို့ နဲ့ သင်ကြားပေးပါမယ်တဲ့။
သင်တန်းကြေးက5သိန်း5သောင်းပါတဲ့ ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ xray အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
networking faqs, networking knowledge
CISCO Ebook collections ကိုဇော် E-Books & Tutorials 31 12-08-2017 11:22 PM
Cisco Infomation Answer အထွေထွေဗဟုသုတ414-03-2017 05:05 PM
Business & Management eBooks sawjonnie E-Books & Tutorials 31 28-09-2012 03:59 PM
Exam Materials zthet Applications 74 29-06-2011 10:14 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 03:48 AM